Sida loo Dallaga MKV Files l
Waxaan u jeednaa dad badan weydii in forums ugu in sida loo noola files MKV u saareen baararka madow ama meel lagu badbaadinayo, iwm, laakiin wax ka jiraan shaqeeyay. Haddii aad tahay mid ka mid ah oo doonaya in ay noola videos MKV oo aan laga badinin tayada video, waxaad yeelan doontaa faraxsanahay fudud iyo awood Cropper MKV in this article. Hubi tallaabooyin ay ku noola files kale sida MP4 halkan.
The MKV qalab abuurka oo waa weyn yahay Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ). Laydi A tuuri kuu ogolaanaysaa inaad noola meel kasta oo ka file MKV marka uu doono iyo suuqa kala-waqtiga dhabta Xiisaha ha kartaa inaad isla markiiba aragtid saamayn abuurka ah. Haddii aadan ku qancay, kaliya effortlessly u sameeyo mar kale. Tan ugu muhiimsan, waxa jira ku dhawaad ​​tayada waayi maayo.
1 Import MKV videos in Cropper MKV this
Ka dib marka aad u abuurtaan. Dooro "16: 9 Widescreen" ama "4: 3 Standard" in la furo interface tafatirka ay. Next, waxaad u baahan tahay inaad ku shuban aad files MKV deegaanka si ay Cropper MKV this. Si aad u samayn, riix "Import" ikhtiyaarka in dhinaca kore ee bidix ee interface in ay caleenta iyo dajiyaan faylasha aad rabto ama si toos ah jiidi oo hoos u files bartilmaameed ka gal ah in Cropper MKV this. Markaas, waxaad u baahan tahay inaad jiidi mid ka mid ah MKV videos aad ka app ee album in ay Timeline ah.
2 Dalag MKV video
Midig u guji bar file ee Timeline ah iyo dooro "Dalag" doorasho. Isla markiiba, suuqa kala Dalag ah arbushin doonaa.
Halkan, waxaad ka arki kartaa laba Falanqeynta daaqadaha iyo mid bidix ayaa laydi ku heysay. Saxaafadda "Play" button inuu u ciyaaro file ah, ka dibna jiidi oo la dhaqaajiyo mid dhinac kasta oo afargees tuuri si ay u doortaan video meel kasta oo aad rabto. Oo waxaad arki kartaa saamaynta in waqtiga dhabta ah ee uu suuqa kala Falanqeynta xaq. Markii wax walba waa ok, riix "Ok" si loo badbaadiyo goobta.
3 dhoofinta file cusub MKV
Hit ah "Abuur" button in la furo ay suuqa kala qaab wax soo saarka. Halkan, aad bixiyo afar hab oo wax soo saarka. Haddii aad doonaysid in aad dhoofin file a MKV cusub, kaliya tagaan "Qaabka" category oo la doortay MKV sida qaab wax soo saarka. Ogsoonow in app this sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad dhigay qaar ka mid ah koobin kale sida xal video, heerka yara iyo heerka jir iwm Si aad u samayn, kaliya ku dhacay "goobaha Advanced" doorasho hoose si aad u samayn goobaha kuwaas.
> Resource > Video > Sida loo Dallaga MKV Files